नोकिया एक्स सिक्स लञ्च, के के छ फिचर्स ? – सकारात्मक परिवर्तनवाहक विचार, कला/साहित्य र सत्य खवरको बाटाे
नोकिया एक्स सिक्स लञ्च, के के छ फिचर्स ?
एजेन्सी । बुधबार चीनको बेइजिङमा नोकिया एक्स सिक्स स्मार्टफोन सार्वजनिक गरिएको छ । स्मार्टफोनको रुपमा एचएमडी ग्लोबलले नोकिया एक्स सिक्स लञ्च गरेको हो । यो स्मार्टफोनमा ए आई तथा एचडिआर फिचर्सयुक्त डुअल रियर क्यामरा रहेका छन् ।
यसका अन्य फिचर्समा अक्टाकोर स्नापड्रागन ६३६ प्रोसेसर, ४ तथा ६ जिबी र्याम र एन्ड्रोइड ओरियो अपरेटिङ सिस्टम रहेको छ । त्यस्तै यो स्मार्टफोनको ४ जिबी र्याम तथा ३२ जिबी स्टोरेज भएको भेरिएन्टको मूल्य १२९९ चिनिया युआन तोकिएको छ भने ६ जिबी र्याममा ६४ जिबी स्टोरेजयुक्त मोडेलको १४९९ युआन तोकिएको छ । यो फोनको बिक्री कहिलेदेखि सुरु हुने भन्ने खुलाइएको छैन । तर कतिपय प्लेटफर्ममा यसको प्री–बुकिंग सुरु भैसकेको छ ।
नोकिया एक्स सिक्सका ५.८ इन्चको फूल एचडी डिस्प्ले रहेको छ । सुरक्षाका लागि २.५ डी गोरिल्ला ग्लास थ्री प्रोटेक्सन रहेको छ । यस स्मार्टफोनले डुअल सिम सपोर्ट गर्दछ ।
मुख्य क्यामरा दुईवटा रहेकोमा एउटा १६ मेगापिक्सेल सेन्सर तथा अर्को ५ मेगापिक्सेल मोनोक्रोम सेन्सरयुक्त रहेको छ । साथै सेल्फी क्यामरा १६ मेगापिक्सेलको रहेको छ ।
फोनमा नोकियाको बोथी फिचर रहेको छ यसका माध्यमबाट प्रयोगकर्ताले फ्रन्ट तथा रिअर क्यामरालाई एकसाथ प्रयोग गर्न सक्दछन् । फोनमा फेस अनलक फिचर रहेको छ । साथै फोनको पछाडिपट्टि फिंगरप्रिन्ट सेन्सर पनि रहेको छ ।
काठमाडौं । हुवावे कम्पनीको स्मार्टफोन नोभा थ्री...
काठमाडौं । जापानले अबदेखि ह्वेल माछाको सिकार गर्ने...
Artha Jagat, International News, Jiwan saili ... , mainNews, Technology Read More
काठमाडौं । इण्डोनेसियामा शनिवार आएको सुनामीकारण...
International News, Jiwan saili, mainNews ... , Technology Read More
CPN (Revolutionary Maoist) seizes 16 Hectors of Land
संचालनमा आयो ‘भिभान्ता काठमाडौं’
जन्ती बाकेको बस दुर्घटना : गम्भीर घाइतेलाई हेलिकप्टरबाट उद्धार
स्कारपियोमा लुकाएर ल्याइरहेको बहुमुल्य पत्थरसहित ५ जनालाई पक्राउ